UYILO LWEPIKETHI YOKUBIYELA (IMIFANEKISO YEENTLOBO EZIDUMILEYO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Uyilo lwePikethi yokubiyela (Imifanekiso yeentlobo ezidumileyo)
Uyilo lwePikethi yokubiyela (Imifanekiso yeentlobo ezidumileyo)
Wamkelekile kwigalari yoyilo lwethu lweepikethi.Uthango lwePikethi luphawu loyilo kunye nokuma komhlaba okubandakanya umtsalane wekhaya lesintu laseMelika. Ukubonelela ngenkangeleko entle yokuma komhlaba kunye nokuvumela ukukhanya kwelanga ukuba kujonge ngothotho lweebhodi ezime ngokulinganayo, uthango lweepokethi lulongezo olusebenzayo nolusebenzayo kulo naliphi na ikhaya. Apha ngezantsi uyakubona iintlobo ezahlukeneyo zokubiyela iipete kwaye ufumane izimvo kunye nenkuthazo yeendlela zokongeza olunye lwezi cingo zintle ekhayeni lakho.
Yintoni uthango lwepikethi? Iingcingo zeepikethi ziludwe lweepaneli ezibekwe ngokuthe nkqo ezibizwa iipikethi eziqhotyoshelwe kunye ngomgaqo oxwesileyo kwaye ziqhagamshelwe kwizithuba zokugqibela. Ikwabonakaliswe ngentla ephezulu kwaye ihlala iphela kwindawo. Ngokwesiko, uthango lwamatye lwenziwe ngomthi lapeyintwa mhlophe ukuthelekisa izindlu zekoloniyali. (Eli nqaku liyinxalenye yethu Uyilo loBiyelo Isikhokelo sokugqibela-jonga apho ezinye iindlela ezithandwayo kunye nemibono yocingo)
iilokhwe zomtshato zikamama ongumyeni
Ukuqala e-United States ngexesha lobukoloniyali, ukubiyela kwakusetyenziselwa ukuchaza imida kunye nokugcina izilwanyana ezincinci ezinjengeenkukhu eyadini okanye ukugcina izilwanyana zasendle ezinje ngomvundla ngaphandle kwezitiya. Ixesha elingaphezulu, uyilo lwayo lwavela lwaza lwaphuculwa ngakumbi kwisitayile sokuhombisa. Izitayile zepiki zazisuka kuhlobo olulula olucabaleleyo njengepaki engenanto, iRound Picket ejikeleziweyo, uhlobo olubukhali olubizwa ngokuba yiPoint Picket kwiintlobo zemihombiso ezinje ngeWindsor Picket, Osbourne Picket, Torrens Picket kunye neMalvern Picket. Izigqibo zongezwa ngaphezulu kwiipokethi njengezinto zokongeza zokuhombisa. Ezinye zeentlobo zeentlobo zezithuba zijikeleze, iWindsor, iAcorn, iPyramid Cap, iColded Cedar, i-Star Top, iPiramidi, uAlbert kunye neFrench Gothic.
Izitayile bezingafani nje kuphela ngokweenkcukacha kodwa kunye nokugqitywa kwazo. Uhlobo ngalunye luveza isimilo esahlukileyo. Amakhaya aseRustic ahlala ehamba nocingo lwamaplanga oludityanisiweyo ngokwendalo ukubonisa imvakalelo esetyenzisiweyo kunye nebukhali. Ucingo lokubiyela intsimbi lwalusetyenziselwa izindlu eziphefumlelweyo zamaGothic kunye neVictorian. Iingcingo ezibiyelweyo zazisetyenziswa njengeengxelo zezindlu zekoloniyali kunye nezitiya zecottage.
Nangona ngokwesiqhelo ibisenziwa ngamaplanga, uyilo locingo lweepokethi ngoku luyafumaneka kuluhlu olubanzi lwezinto ezinje nge-vinyl, i-PVC, isinyithi, intsimbi eyenziweyo kunye nealuminium. Ezinye iindlela zala maxesha ezinje ngeepaneli ezidityanisiweyo kunye neepaneli zocingo ezisikiweyo zibonelela ngabanini bamakhaya ngokufakelwa lula kunye nezibonelelo ezongeziweyo. Izinto ezongezelelweyo zokuhombisa zinokudityaniswa kuyilo ngalunye ukuze zibenze babonakale ngakumbi. Uhlobo ngalunye luya kuxutyushwa ngokucokisekileyo njengoko ufunda kweli nqaku.
Iindleko zokubiya ipikethi
Iindidi zocingo lwePiki
Iipikethi zocingo lweenkuni
Iipokethi zoCingo lweCedar
Iipikethi zocingo lwePine
Iipikethi ezibiyelweyo zeRedwood
Uxinzelelo oluphathwe kwiipokethi zocingo
Ucingo lwePiki emhlophe
Kucingo olubiyele lwePicklick
Iiphaneli zocingo lwePikiti
Iiphaneli zoBiya zePikethi eziDibeneyo
Ucingo lwePikethi yamaFrentshi eGothic
Metal Picket Ukubiyela
Kucingo olubiyekileyo lweAluminiyam
Ucingo lwepikethi ye-DIY
Kucingo olubiyele lwePiki
Kucingo olubiyekileyo lwepikethi
Ungazifaka njani iiNgcingo zePikethi
Amanyathelo okufaka ucingo lwePikethi:
Ucingo lwePikiti elincinci
Ucingo lwePikethi yeenyawo ezi-4
Ucingo lwabucala lwePiki
Iipikethi zocingo ezi-8
Ukuhonjiswa kwePick Pence
Yintoni ubungakanani obuqhelekileyo beepikethi zokubiya? Ngokuqhelekileyo i-3 ukuya kwi-4 inyawo ubude okanye ii-intshi ezingama-36 ukuya kuma-intshi angama-48 (91 ukuya ku-122 centimeters), iingcingo zepikethi zifutshane kunezinye iintlobo zocingo. Nangona kunjalo, ukuphakama kwayo kunokuguqulwa ngokweemfuno zomntu. Ukuba isetyenziswa njengeepaneli zabucala, ukuphakama kwepikethi yocingo kunokunyuswa kuye kwii-4 ukuya kwi-6 iinyawo. Oku kuyakuxhomekeka kwimida ebekwe yimithetho yocando lwedolophu ke qiniseka ukuba uyayijonga kuqala ukuba unenjongo yokwakha njengomda weperimeter ngaphambili kwendlu yakho okanye ngasemva. Isithuba semigangatho sepikethi sihlala sizi-intshi ezi-6 ukuya kwezi-8 ngokwahlukeneyo.
Injongo yocingo lwepikethi. Nangona isebenza njengendawo yokuhombisa izindlu ezininzi, iingcingo ezibiyelweyo ziluncedo kwindalo. Iingcingo zeepikethi zisetyenziselwa ukucacisa iindawo kunye nokubonisa imida phakathi kweqashiso lakho, iyadi yommelwane okanye indlela esecaleni. Yindlela elungileyo yokubonisa igadi okanye imbonakalo yomhlaba ngaphandle kokuthintela iimbono. Iingcingo zeepikethi zikwalungele ukugcina izilwanyana zasekhaya kunye nabantwana ngaphakathi kweyadi yakho. Ikwasebenza njengokukhusela izityalo nolunye uhlaza.
Ezinye izibonelelo zokuba nocingo lweepikethi zekhaya lakho zibandakanya ukongezwa kwemvakalelo yokhuseleko kunye nokuqina okuyimfihlo kubantu abadlulayo, abantu ongabaziyo okanye abamelwane. Ikwaphucula ubuhle beliphi na ikhaya okanye igadi. Nangona kunjalo, icala elisezantsi locingo lweepikethi kukuba ayicetyiswa kubanini bamakhaya abafuna ukuba bucala ngokupheleleyo ngenxa yezithuba eziphakathi kwepikethi nganye.
Iindleko zocingo lokubiyela zixhomekeke kwizinto ezininzi ezinje ngohlobo lwezinto ekufuneka zisetyenzisiwe, ukuphakama kwepikethi, ubunzima bokuyilwa (nokuba icacile, iscalloped okanye ngaphezulu kokuhombisa) kunye neempawu ezongezelelekileyo ezifana nesango. Uhlobo lweprojekthi lukwadlala indima ebalulekileyo ekumiseni itotali njengoko iindleko ezongezelelweyo zabasebenzi ziya kongezwa ukuba ukhetha ukuqesha ingcali ukuba yenze umsebenzi. Ngaba uzenzele iiprojekthi, kwelinye icala, zinokukugcinela isixa semali esifanelekileyo.
Eyona nto ibiza kakhulu yokwakha iingcingo yintsimbi exutywe ngelixa ixabiso eliphantsi ingumthi.Iipaneli ezidityanisiweyo okanye ezenziwe ngaphambili zikuluhlu lwamaxabiso aphakathi kwaye zinokonga ixesha kunye nomzamo ngelixa zisika iindleko zabasebenzi. Ezi zinto zifumaneka kwiindawo ezininzi zokuphucula amakhaya. Umthi unokuthengwa kubathengisi bemithi abakhethekileyo ngelixa ucingo lokubiyela lwensimbi lunokuthengwa kubavelisi. Iiphaneli ezidityanisiweyo zangaphambili kunye neekiti zocingo lweepikethi ziyafumaneka kwiivenkile zekhaya zokugcina okanye zingathengwa kwi-Intanethi.
Kuxhomekeke kwezi zinto zilandelayo zikhankanywe apha ngasentla, nazi ezinye iindleko eziphakathi ezenziweyo kulwakhiwo locingo lweepikethi:
Umthi. Ngaba uzenzele iiprojekthi, iindleko eziqhelekileyo ze-3 ukuya kwi-4 ubude ubude bokubiyela ngamaplanga yi- $ 3 ukuya kwi- $ 40 okanye nangaphezulu ngeenyawo zomgama. Kwi-100 yeenyawo zokhuni lwe-picket, iindleko eziphakathi zi- $ 400 ukuya kwi-1800 yeedola kuyo yonke iprojekthi ngokufakwa kwe-DIY. Kwelinye icala ucingo lwe-picket olude lweenyawo ezingama-300, kwelinye icala, linokufikelela kwi-1000 ukuya kwi-5000 yeedola kwiprojekthi yonke ngokufakwa kwe-DIY.
Kwiiprojekthi ezifuna abasebenzi abaqeqeshiweyo, ucingo lwamaplanga alunokubiza malunga ne-10 ukuya kwi-75 yeedola ngeenyawo zomgama. Ngocingo olude lweeplanga ezili-100, ixabiso eliphakathi li- $ 1000 ukuya kwi-8000 yeedola kuyo yonke le projekthi ngofakelo lobungcali. Kwelinye icala ucingo lwe-picket olude lweenyawo ezingama-300, lunokufikelela kwi- $ 300 ukuya kwi-24,000 yeedola kuyo yonke le projekthi ngofakelo lobungcali. Ezi ndleko ziqikelelweyo ziyahluka ngokuxhomekeka kumaxabiso emisebenzi kwindawo yakho.
IVinyl. Zenzele iiprojekthi, iindleko eziqhelekileyo zocingo lwe-vinyl picket zii-10 ukuya kwi-20 zeedola okanye ngaphezulu ngeenyawo zomgama. Ngocingo olude lwe-vinyl picket ucingo oluyi-100 yeenyawo, ixabiso eliphakathi li- $ 1000 ukuya kwi- $ 2500 kuyo yonke iprojekthi ngokufakwa kwe-DIY. Kwelinye icala ucingo lwe-vinyl picket olude, kwelinye icala, linokufikelela kwi-2800 ukuya kwi-6200 yeedola kwiprojekthi yonke kufakelo lwe-DIY.
Ngofakelo lobuchwephesha, iindleko eziqhelekileyo zocingo lwe-vinyl picket zii-15 ukuya kwi-25 zeedola okanye ngaphezulu ngeenyawo zomgama. Ngocingo olude lwe-vinyl picket ucingo oluyi-100 yexabiso, ixabiso eliphakathi li- $ 1600 ukuya kwi- $ 3000 kuyo yonke le projekthi. Ngelixa ucingo olude lwe-vinyl picket lunokufikelela kwi- $ 4600 ukuya kwi-8000 yeedola kwiprojekthi yonke. Kwakhona ezi ndleko zinokwahluka ngokwamaxabiso emisebenzi yengingqi yakho.
Intsimbi eyenziweyo Iingcingo zokubiyela zihlala zibiza i-30 ukuya kwi-40 yeedola ngenyawo ngalinye. Ukuba ukhetha ukubeka isango kwifowuni yakho yokukhetha, lindela i $ 200 ukuya kwi-1000 yeedola ngokuxhomekeke kuyilo.
Ezinye zeesampulu zeendleko zesampula zezinye izinto eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo ekwakheni ucingo lokubiyela ziya kuxutyushwa ngokucokisekileyo njengoko sihamba kuhlobo ngalunye kamva.
Zininzi izinto onokukhetha kuzo ezinokusetyenziselwa ukwakha uthango lweepikethi. Uhlobo ngalunye luza ngeendlela ezahlukeneyo, imilo kunye nobukhulu obunegalelo kubalinganiswa abohlukeneyo ekubonakaleni kwendlu yakho nasemva kwendlu.Apha ngezantsi kukho ezinye zeentlobo ezithandwayo zocingo lokubiyela kubandakanya ukujongwa kweempawu zabo, izinto ezintle, ukungahambi kakuhle kunye neendleko. Ukongeza kolu lwazi, phefumlelwa kwigalari yethu yezimvo zocingo lweepikethi kwaye wazi ukuba loluphi uyilo olulungele ikhaya lakho.
Iinkuni zezona zinto zaziwayo nezisemgangathweni kuyilo locingo lweepokethi. Iyathandwa kakhulu ngabanini bamakhaya ngenxa yobuhle bayo bendalo, ukuzinza kwayo kunye nokufumaneka kwayo kwintengiso. Xa kuziwa kuyilo, inika ukhetho oluninzi njengoko umthi ulawulwa ngokwezifiso kwaye unokunqunyulwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ukugqitywa okwahlukileyo okunje ngeepeyinti okanye amabala emithi. Ukugqitywa okugqityiweyo kukhethwa ngabaninzi kuba ayicimi xa ibonakaliswe kutshintsho lwemozulu yendalo.
Ezinye izibonelelo zokusebenzisa iinkuni kwiipikethi zocingo kukuba yomelele kwaye inokuhlala iminyaka inyangwa ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo enye yeengxaki zayo kukuba ifuna ulondolozo rhoqo kunye nonyango kuba ithambekele kwizitshabalalisi, ukubola, ukungunda kunye nezinye izinto zangaphandle. Ikwaqwalaselwa njengexabiso eliphantsi, ngesiqhelo kubiza malunga ne- $ 5 ukuya kwi-10 yeedola ngeenyawo zomgama ngokuxhomekeke kubungakanani kunye nesitayile. Kwi-avareji, iicingo zokufaka iiplanga ezine zeenyawo zibiza i-9 yeedola ngeenyawo zomgama ngelixa i-6 yeenyawo ubude bokubiyela ngamaplanga kuxabisa i-15 yeedola ngeenyawo. Iinkuni ezinyangiweyo zibiza ngaphezulu njengoko ziphantsi kokugqitywa okukodwa okwenza ukuba zihlale ixesha elide.
Uhlobo lweenkuni ezisetyenziselwa iipikethi luchaphazela ukomelela kocingo lwakho. Xa ukhetha izinto ezifanelekileyo, yiya kunye neentlobo zemithi ezizinzileyo kwaye ziyavavanywa ukumelana notshintsho lwemozulu. Iindidi eziqhelekileyo zemithi ezisetyenziselwa ukubiyela ngamaplanga ngumthi womsedare, ipineyini kunye neredwood. Ubungakanani bemithi yamaplanga okuqokelela amaplanga aqhele ukwenziwa 2 x 4.
Umsedare luhlobo lomthi oluhlobo lomthi othambileyo onemibala eqala kumhlophe, tyheli ukuya kubomvu. Imisedare ikhula kwimimandla enemozulu emanzi ebabeke esichengeni sokuchaphazeleka okukhulu kwizinto ezonakalisayo ezinje ngomngundo, ukungunda, izinambuzane kunye nokufuma. Ngenxa yoku, bavelise iimpawu zokuzikhusela ukuze baziqhelanise kakuhle nokusingqongileyo. Olu lukhetho oluphezulu lokubiyela ngamaplanga kuba luyomelela xa lumanzi. Izibonelelo zokusebenzisa ukhuni lomsedare njengeepikethi zocingo zibandakanya iipropathi zokugquma okuphezulu kunye nokufakwa kwengxolo kuba zinobushushu. Izinzile kwakhona, ayinabisi kwaye ayisiyi-warp kwaye iyamelana nokwahlukana kunye nokuqhekeka. Xa kuziwa ekwaluphaleni, iminyaka yemithi yomsedare ngokuthelekiswa ngokuthe kratya nezinye iintlobo zeenkuni. Ikwanobuhle bendalo ngombala wayo odlamkileyo kunye neepateni zokutya okuziinkozo.
Ezona ntlobo zixhaphakileyo ezisetyenziselwa ukwenziwa kocingo yi Western Red Cedar yona ithambileyo, inevumba nebomvu bomthi. Nangona umthi wexabiso eliphezulu oxabisekileyo, uqinisekisiwe ngabanikezeli abaninzi ukuba bahlale iminyaka engama-30 njengoko buncinci kakhulu. Ezinye iindidi zibandakanya i-Atlantic White Cedar, i-Northern White Cedar kunye ne-Eastern Red Cedar ethi ichazwe njengokukhanya, iindidi zemithi yomsedare emhlophe. Ikwaluncedo ngocingo kuba azithambekele ngokwaphuka xa ziveliswe ukufuma kunye neqondo lobushushu.
Iindleko zilumkile, ukhuni lomsedare lutyalo-mali olusebenzayo. Iingcingo ezi-6 zeenyawo zomthi womsedare zokuchola zihlala zibiza i- $ 15- $ 30 iinyawo ezilandelanayo kwiiprojekthi ze-DIY. Ezi ndleko ziphindwe kabini xa uthatha isigqibo sokuqesha ingcali ukuze ikufakele. Ikwafumaneka kwiiplanga kwi $ 8 kwisiqwenga ngasinye sonyango olwahlukileyo.
Kuyacetyiswa ukuba iingcingo zokuchola ukhuni lomsedare zilondolozwe rhoqo ukuze kwandiswe ubomi. Kwakhona, ibhetele kakhulu ngokutywinwa kwamanzi endaweni yepeyinti njengoko ivumela iioyile zendalo ukuba zikhule ziyenze inambuzane nokubola kunganyangeki.
Ipayini lolunye uhlobo lomthi othambileyo onombala otyheli okanye omhlophe onamaqhina ansundu. Ikhaphukhaphu kwaye ayibizi mali ininzi eyenza ukuba ibe lolunye ukhetho oludumileyo lweepikethi zocingo.
Ezinye izibonelelo zokusebenzisa iPine yocingo lwepikethi zibandakanya ukunganyangeki kunye nokudumba. Kwakhona ithatha ipeyinti kakuhle kwaye inokugqitywa ngokokuthanda komntu. Njengokuba indala, iinkuni zePine zikwaphuhlisa i-rustic patina ethi ithengise kubuhle bayo bendalo. Uxinzelelo oluphathwe iPine luqinisekisiwe ukuba luza kuhlala iminyaka luyenza ukuba ibe sisilumko kwiindleko eziphantsi. Kwelinye icala, icala layo eliphantsi kukuba ithanda ukukrwela kunye nokutswina ngenxa yokuthamba kwayo.
Uxinzelelo lokuphathwa kwepine kubiza ixabiso eliphantsi kunokhuni lweCedar olubiza i-10 yeedola ukuya kwi-25 yeedola kumgama wonyawo kubandakanya ukufakwa.
I-Redwood luhlobo lomthi oluhlala luvunwa kwinxalenye yasentshona ye-United States. Ngeempawu ezifanayo nomthi weCedar, iRedwood ibonakaliswa ngombala wayo obomvu ngombala obomdaka ngombala kunye nepateni yokutya okuqinileyo.
I-Redwood ikwanayo nee-oyile zendalo ezenza ukuba inganyangeki ukufuma kunye nokufuma, kugxothwe kwizinambuzane kwaye kungathambeki ukubola nokubola. Kananjalo ayiluki, ayandisi, ayiqhekeki okanye yahlukane ngokungafaniyo nezinye iintlobo zeenkuni. Ezi zinto ziphambili zendalo zenza ukuba zihlale ixesha elide njengezinto zokubiya.
Ayifuni kulondolozo oluninzi kodwa inokuthi inyangwe ngamathuba athile ngokwenza kwakhona ukunyusa ukuzinza kwayo. Ngenxa yamanqanaba aphezulu eoyile yendalo ekhoyo eRedwood, kunokuba nzima ukupeyinta. Endaweni yoko, inokugqitywa ngamabala acacileyo ukuze ingabi ngwevu kule minyaka idlulileyo.
Kucingwa ukuba lolona hlobo lubiza kakhulu lwezinto zokubiya ngomthi, zihlala zibiza i-17.50 yeedola ukuya kwi-20 yeedola. I-aesthetics kunye neempawu zayo ezibalaseleyo zenza utyalo-mali olumkileyo kunye nokhetho olufanelekileyo lokubiyela ngamaplanga.
Uxinzelelo oluphathwe ngokhuni lwenzeka kwinkqubo enyanzela imichiza kunye nezinye izinto eziselugcinweni ukuyikhusela kwizinambuzane, kwiintubi nakokubola. Umthi uphantsi konyango etankini kwaye okokuqala uxinezelekile kwaye uzaliswe zizigcinisi phantsi koxinzelelo oluphezulu. Kuthathwa njengenkuni kuwo onke amaxesha onyaka kuba inokumelana notshintsho olukhulu kwiqondo lobushushu kwaye iza newaranti yobomi evela komnye umonakalo.
Olu hlobo lweenkuni lungangcwatywa emhlabeni ngaphandle kokukhathazeka ngokubola kunye nokuvezwa kukufuma. Inokupeyintwa okanye kungcoliswe emva kweenyanga ezi-3 ukuya kwezi-6 zokoma. Uxinzelelo oluphathwe ngokhuni luhlala lubolile mahala phantse iminyaka engama-40.
I-4 x 4 ingcinezelo yokuphathwa ngokhuni ixabisa i-9 ukuya kwi-20 yeedola ngesiqwengana sobude obususela kwi-8 yeenyawo ukuya kwi-16 yeenyawo. Kwiziqwenga ezincinci ezivunyiweyo kufakelo lomhlaba olungasentla, i-2 x 6 yeplanga ihlala iyi-6 yeedola kwisiqwenga sobude obuziimitha ezi-8 ukuya kuthi ga kwiidola ezili-11 ngesiqwenga ngasinye ngobude obuli-16 leenyawo.
U-galia lahav unxiba amaxabiso omtshato
Uxinzelelo oluphathwe ngocingo- Wayfair
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa ucingo olucinezelweyo. Ukugqitywa kwebala lomsedare kolu cingo kongeza umtsalane welizwe kweli khaya laseMelika ngelixa ukhonza njengendawo yangemva yokugubungela umhlaba kunye nemidiliya.
Uyilo lokubiyela olumhlophe lubonwa njengolongezayo elinomtsalane kwikhaya laseMelika yaseMelika. Ukuqala e-United States kwiintsuku zokuqala zekoloniyali, kwaba yinto eyaziwayo ezindlwini, efanekisela ubomi obukumgangatho ophakathi ophakathi. Iziciko ezimhlophe zokubiyela ziyaziwa ngokuntshula izitiya neeyadi. Isitayile esithandwayo socingo kuba umbala waso omhlophe olula usebenza njengemvelaphi yokubonisa ubuhle bembonakalo yomhlaba. Kwakhona yinto eqhelekileyo kwiigadi eziphefumlelweyo. Bona Okuninzi Izimvo zocingo lwegadi Apha.
Ucingo lokubiyela olumhlophe lunokwakhiwa kwangoko okanye luthengwe kwangaphambili. Ngaphandle kohlobo lwesiko lomthi, imarike yangoku ikwabhenela kwezinye izinto ezinje ngevinyl kunye nePVC. Ukuvumela ukufumaneka lula kufakelo, iingcingo ezibiyelweyo ezimhlophe ngoku ziyafumaneka kwiiphaneli okanye iikiti.
Iingcingo ezibiyelwe ngamaplanga amhlophe ziyimpawu yotyikityo lwesimbo saseKapa seCod izindlu zaseMelika kwaye isebenza kakuhle ekuchazeni indawo yabucala kunye noluntu.
Ucingo lokubiyela olumhlophe yindlela elula yokongeza umahluko kwizitiya ezinemibala emibala kunye neentyatyambo.
Iingcingo ezimhlophe zeepikethi zinokwakhiwa kuyilo olwahlukileyo ngaphandle kwesimbo esiqhelekileyo esimiselweyo. Iipokethi zesitayile esine scalloped kunye neefayini zokuhombisa zeeposti zocingo zongeza isandi kule ndlwana yamatye.
Ukongezwa kwesango ocingweni olumhlophe lweepikethi zombini kuluncedo kwaye kuyimpawu yokuhombisa. Apha ungabona ukuba indibaniselwano yendlela yezitena kunye neengcingo ezibiyelweyo ezimhlophe zizisa umahluko kubume kunye nombala onika le bungalow imvakalelo entle.
Ucingo olumhlophe lweepikethi kunye neepokethi zesitayile seGothic kunye nesango eligciniweyo le-concave zizinto ezindala zokuhombisa umhlaba ezongeza ukubonakala okungapheliyo ezindlwini zekottage.
Uyilo oluntsonkothileyo locingo olumhlophe lweepikethi, olu hlobo ludibanisa iipikethi ezichaziweyo eziphakamileyo ezahlukeneyo kunye ne-arch kunye nesango eli-lattised elisebenza ngokugqibeleleyo kule gadi yesitayile sobukoloniyali.
IVinyl yindlela yanamhlanje kwizinto zokubiya eziqhelekileyo ezinje ngomthi okanye isinyithi. Yinto elula kwaye yomelele kwaye yomelele. Ucingo lwe-Vinyl picket luza ngemibala eyahlukeneyo kunye nezitayile ezenza ukuba zitshintshe ngokwendlela yoyilo. Nangona umbala omhlophe ngowona mbala uqhelekileyo weengcingo ze-vinyl picket, ufumaneka kumdaka, i-beige okanye ezinye iinketho eziphezulu ezifana ne-faux granite, ilitye okanye ukugqitywa kombhalo. Inokuhonjiswa ngezinto ezongezelelweyo zokuhombisa ezinje ngeposi yokugqibela. Kucingo olubiyele iipikethi zingasetyenziselwa usetyenziso lwendabuko kodwa zinokuhlaziywa ukuze zilungele izimbo zale mihla.
Ngenxa yokuba ikakhulu yenziwe ngeplastiki, ucingo lwe vinyl picket alulungelanga ukubola. Iyamelana nokubola kwaye ifuna ukugcinwa okuphantsi njengoko inokucocwa ngamanzi nje kunye nesepha. Ngokwesiqhelo kugunyaziswe ngabanikezeli ngeenkonzo ukuba bahlale iminyaka eli-10 ukuya kweli-15 ngaphandle kokufuna unyango olwenziwa ngamathuba athile njengokubonisa ubungqina bokutya kunye nokupeyinta Izinto ezingalunganga, kwelinye icala, zibandakanya ukuba sesichengeni kwemozulu ebandayo nekhephu. Ayinakuma ubushushu kwaye ayikhuselekanga njengezinye iintlobo zocingo. Nangona intle ngendlela yayo, ayinaso isibheno sokubonakalayo esifana nokhuni.
Ixabiso elichanekileyo, ucingo lwe-vinyl picket lubiza kakhulu kodwa lubonakalisa ukuba lutyalo-mali olumkileyo kuba luyahlawula ekuhambeni kwexesha. Ixabiso lempahla eliqhelekileyo liqala ukusuka kwi-15 ukuya kwi-20 yeedola kumgama wonyawo, iidola ezingama-40 zocingo lwabucala. Iindleko zoluhlu lokufaka ukusuka kwi-10 ukuya kwi-25 yeenyawo ngeenyawo nganye okanye kwi-35 ukuya kwi-50 yeedola ngeyure ngokuxhomekeke kwindawo yeprojekthi.
Iingcingo ezibiyelweyo ezimhlophe ziyancedisa kwinkangeleko yesiqhelo yeli shingle styled Mid Century American home. Yindlela efanelekileyo yokufaka iyadi ngaphandle kokuthintela umbono kunye nobuhle bekhaya lakho.
Ucingo lwe-Vinyl picket-Umthombo
Iphaneli yocingo lwe-vinyl emhlophe yeplokethi esebenza njengendawo egxininisayo yegadi ngelixa ikhusela izityalo. Olu hlobo locingo lweepikethi lunokufakwa ngokulula ngokuluseta emhlabeni. Iipaneli ezilungiselelwe ezenziwe ngolu hlobo ziyafumaneka ukuthengwa kwi-Intanethi.
Iphaneli yocingo lweVinyl - Imvelaphi
Iphaneli yocingo lwe-vinyl picket ifanisa ukubonakala kunye nokugqitywa komthi womsedare. Olunye uhlobo olukhulu lwezixhobo eziqhelekileyo, inegalelo kubuhle obufanayo kunye nocingo oluqinileyo lweplanga.
Idityaniswe neentyatyambo ezipinki nezityheli, iingcingo ezibiyelweyo ezimhlophe zisebenza njengomda wothando kule yadi ngelixa zibonelela abadlulayo ukubona igadi entle.
Iiphaneli zocingo lwepikethi ziiphaneli ezidityaniswe ngaphambili ezihlala zenziwe ngomthi, isinyithi, ivinyl okanye iPV. Yenziwe njengamacandelo, ithengiswa ngeseti nganye kwaye iza nazo zonke iindawo eziyimfuneko kufakelo. Iikiti zihlala zinepaneli enye, iposti enye, ikepusi kunye ne-ankile. Ngokulula kulula ukuyifaka njengoko kungafuneki kugrunjwe, iiphaneli zocingo lweepikethi zilungile kubanini bamakhaya abanqwenela ukuzama ukwakha ucingo lweepokethi bebodwa.
Iipaneli zentsimbi okanye i-aluminium yeepikethi zocingo ziza ngamacandelo e-6 ukuya kwi-8 yeenyawo ngobude obuqhelekileyo beenyawo ezi-4. Uninzi lwezi paneli zocingo lweepikethi ziza newaranti yeminyaka eli-10 kwaye zibiza malunga ne- $ 50 ukuya kwi- $ 100 ngesiqwenga ngasinye.
Iphaneli yokubiyela enye isebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kule gadi iRustic. Iipokethi zaseFrance zamaGothic kunye nokongezwa kweendawo zokugcina iintaka ngaphezulu kwesiphelo ngasinye kwenza ubucukubhede obufuneka kakhulu kolu luhlu lomhlaba.
Ucingo olumhlophe lwevinyl picket - Imvelaphi
Iiphaneli zocingo ezimhlophe zepikethi emhlophe ayomelelanga kuphela kodwa kulula ukuyigcina nokuyifaka. Olu hlobo lwepaneli yocingo lweepikethi aludingi ukumba kwaye lubekwe ngokulula kwaye luhlanganiswe ngokudibeneyo.
Iiphaneli zokubiyela ngeplanga zingathengwa kubathengisi bendawo kwaye zihlala zinamacandelo. Ngokukhawuleza ukuba iipaneli zakho zocingo lweepikethi zisiwe ukwenza umnyango wakho, akukho sidingo sokukhathazeka ngokufakwa kuba kunciphisa inani lomzamo kunye nexesha leprojekthi ukuya kwisiqingatha.
Iipaneli zocingo ezidityanisiweyo lolunye uhlobo lwangoku kwimithi kunye nevinyl. Ezi paneli zobunjineli zefektri zenziwe ngumxube womthi kunye neplastiki kodwa zineempawu ezifanayo ezomeleleyo nezomeleleyo zevinyl. Kuthathelwa ingqalelo njengolondolozo olusezantsi, iipaneli zocingo ezidityanisiweyo azidingi peyinti okanye unyango. Ikwafuna umgudu omncinci wokufaka kuba ilungile. Enye yecala layo elibi kukuba ngamanye amaxesha iyanda kwaye ineekhontrakthi kubushushu obukhulu. Abanye abaninimzi bakhetha le nto kuba ilandela imigangatho yendalo esingqongileyo kwaye ithathwa njengemveliso eluhlaza.
Xa kuziwa kuyilo locingo lwepokethi, ezi paneli ziyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo kodwa okwahlukileyo okuxhaphakileyo kulingisa ukubonakala komthi. Iphaneli yocingo edityanisiweyo ixabisa i-16 yeedola kumanqanaba omgama kuyilo olusisiseko kunye ne- $ 25 yohlobo oluthile lokuhombisa.
Ucingo lokudibanisa ukhuphiswano- Imvelaphi
Iiphaneli zocingo oludibeneyo lokudibanisa ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemibala. Le gothic iphefumlelweyo yeplanethi yeepikethi yothango olulinganisiweyo ifanisa ukubonakala kweCedar kakuhle kangangokuba awunakude uxele ukuba ayenzelwanga eyona nto yokwenyani.
Iingcingo zaseFrance zamaGothic sisitayile yoyilo esibonakala kwi-arch ebonisiweyo. Olu hlobo lwalugqugqisile eFrance ngexesha le-1100 ukuya kwi-1500's. Olu cingo lusetyenziselwa ukuchaza indawo kunye nokunxiba amakhaya kunye nezitiya zemveli. Ngokwesiqhelo yenziwe ngamaplanga anyangiweyo, i-vinyl okanye ithengiswa njengeepaneli zocingo ezidityanisiweyo, izinto zayo ezilungileyo nezingalunganga kunye neendleko zixhomekeka kudidi lwezinto ezisetyenzisiweyo.
Iingcingo zase-French Gothic scalloped picket fence ezifakwe ecaleni komjikelezo wale cottage yaseMelika ichaza ngokucacileyo umda wale ndawo ngelixa uzalisa ubuhle bendabuko bendawo ejikelezileyo.
Ucingo lweCedar Picket - Imvelaphi
Ukunamathela kwisibheno selizwe, i-French Gothic Cedar picket fences inokugqitywa nge-varnish ecacileyo kwaye ishiywe kumbala wayo wendalo. Umbala obomvu weenkuni wahluke ngokungafaniyo kwikhaya elinomtsalane lasekhaya laseMelika.
Ukusetha ngokuchasene nemvelaphi yojongilanga eqaqambileyo etyheli, olu cingo lwaseFrance lwaseGothic lumhlophe lisebenza zombini njengegama lokuhombisa kunye nomda wegadi ejikelezileyo.
uthi ndiyathandana xa ndingeva kwanto
Ucingo lokubiyela ngesinyithi luqhele ukwenziwa ngentsimbi eyomeleleyo kwaye ithathwa njengenye yezona zinto zibiza kakhulu kwimarike. Umsebenzi onzima nohlala ixesha elide, awuthambekele ekonakaleni ngezinambuzane, ukugoba nokubola. Kuyasebenza ngokubhekisele kwezokhuseleko. Ulondolozo lulumkile, lufuna ukuba luphuculwe kwaye lubuyiselwe ubuncinci kabini ngonyaka. Nangona ingathathelwa ngqalelo njengokubonakala ngathi ibiyelwe ngamaplanga, ilungile ukongeza umahluko kumakhaya emveli aneClassic, iVictorian, isiNgesi, isiFrentshi okanye iVintage.
Enye yeengxaki zokusebenzisa uthango lwe-meta picket kukuba iyathandeka kwimingxunya kunye nomhlwa ngexesha leemvula. Ukuxabisa malunga neepesenti ezingama-25 ngaphezulu kunezinye izinto, iifenithi zentsimbi ezenziwe ngentsimbi zibiza i- $ 100 ukuya kwi-300 yeenyawo ngonyawo ngokubanzi. Izinto ezizodwa zinokubiza i-20 yeedola ukuya kwi-100 yeenyawo ngomgama ngamnye. Ngomsebenzi, qwalasela inani elongezelelweyo lama-300 eedola ngokuxhomekeke kubukhulu beprojekthi.
Olu cingo lwenziwe ngesinyithi kunye nezinto zokuhombisa zeBoston ezahluke mpela kumnyango ophambili otyheli udibanisa zombini izitayile zala maxesha nezakudala kunye.
I-Aluminium luhlobo lwesinyithi esifana nentsimbi. Iingcingo ze-aluminium zokukhetha zihlala ziqatywe umgubo ngemibala eyahlukeneyo okanye uburhabaxa kwaye zinqweneleka kakhulu kwizicelo zesintu nezala maxesha. Ukutyabeka umgubo yinkqubo ekhethekileyo yokupeyinta ephilisa ipeyinti kwisinyithi ukuyenza yomelele. Ngokungafaniyo nentsimbi eyenziweyo, ialuminium ayina rusi, yomelele ngakumbi kwaye phantse ayinakonakala.
Yindlela ebizayo yesinyithi ebiza malunga ne-22 ukuya kwi-35 yeedola ngeenyawo zomgama. Iprojekhthi yocingo yokukhahlela iinyawo ezi-4 elula inokufikelela kwi- $ 2000 ukuya kwi-5000 yeedola. Nangona kunjalo kuyangqinwa ukuba lulutyalomali olunobulumko kuba luza newaranti yobomi.
Iingcingo ze-Aluminium zokucofa zihlala zilula kwaye zilungelelaniswa kodwa azisoze zisilele ukongeza ubume bomhlaba.
Iingcingo ze-Aluminium zokubiyela zinokuba yinto yokuhombisa ngohlobo olufana nolu luyilo luboniswe ngasentla olunomkhonto weFleur de lis finials kunye nokuhonjiswa okujikelezayo phakathi kweentsimbi eziphezulu.
I-DIY okanye Yenze ngokwakho ukubiyela uthango zilungele abaninikhaya abafuna ukwenza iindawo zabo zibe zezakho. Njengokubiyelwa kweefreyini kungenziwa ngokokuthanda komntu, akukho mda kwizinto ezinokusetyenziswa, nokuba zintsha okanye zinokuphinda zisetyenziswe. Ngokuhamba ngebhayisikile njengangoku, le yindlela elungileyo yokubeka izinto ezindala ekusebenziseni kakuhle. Kuthathelwa ingqalelo njengeendleko eziphantsi kunye nesisombululo esikhawulezayo sokufaka iyadi okanye indawo.
Nazi ezinye zeendidi zocingo lwe-DIY picket:
Iziteyki zomthi ezingalinganiyo ezidityaniswe ziingcingo zesinyithi yinguqulelo elula yothango olusebenza ngokugqibeleleyo kwiindawo ezisemaphandleni ezingaphandle.
Uninzi lwezicingo ze-DIY ezikhethiweyo zisebenzisa iinkuni ezihlanguliweyo okanye iziqu zemithi ezihlanguliweyo ezisikwe kwiipokethi ezizodwa kwaye zahlanganiswa ziintambo. Ukwenza igalelo kuloo maphandle kunye nesibheno esenziwe ngesandla, ihlala ishiywe ingapeyintwanga kunye noburhabaxa. Iingcingo zokubamba ezikhethiweyo zikwalungele ukongeza umtsalane we-rustic eyadini okanye kwindlu. Ukucoca yindlela yoqobo esetyenziselwa ukwenza uthango ngexesha lakudala. Iingcingo ze-Rustic picket nazo zingenziwa ngamatye okanye izinto ezixubekileyo.
Yenza oku ngokwakho ucingo lwepokethi lwenziwe ngamasebe emithi asikwe ngokulinganayo kwaye ashiye kwimozulu ngokwendalo. Kwakhona kulula ukuyila njengoko ifuna nje unxibelelwano olulula usebenzisa iinzipho.
Olu cingo lungalinganiyo lomthi oludala ngokungalinganiyo ludala ngokundilisekileyo ngenxa yobukho be patina yendalo enegalelo kumtsalane wayo weRustic.
Ukuphinda usebenzise iipelethi kwenza indlela kwishishini langoku. Yindlela enye yokuphindaphinda into ethathwa njengesiqwenga somthi esinexabiso eliphantsi. Iipelethi zibhodi yeplanga ethe tyaba eyenziwe ngamalungu athe nkqo kungekho bhodi yomgangatho usezantsi. Ezi zisetyenziselwa ukuxhasa iimpahla okanye izinto ezinzima ngexesha lokuhamba. Zifumaneka lula okanye ukuba azikho simahla, zinokufumaneka ngexabiso eliphantsi. Uninzi lweendawo zokugcina zigcina nje emva kokuba zisetyenzisiwe kwaye ziya kukugcinela imali eninzi.
Xa usakha uyilo locingo lwe-pallet ye-DIY pallet, qiniseka ukuba zikwilingana kunye nombala. Kwaye ukuba kunokwenzeka, jonga ezo zisetyenziselwa ukuxhasa iimpahla ezomileyo kuba zichanabeke kakhulu kwimichiza. Iipelethi zomthi wepine zilungele ukwakha ucingo lweepikethi njengoko zingasindi, zithambile kwaye kulula ukuzisika. Nokuba yeyokwakhiwa njengothango olusisiseko lokuthwala oluqulathe iiposti ze-T ipallet ityibilika phezu kwazo, okanye indlela ehambele phambili efuna ukusasazwa ngokusika ii-slabs ngasemva kwepallet. Ingagqitywa ngepeyinti ekhusela imozulu ukongeza ukhuselo ngexesha lokutshintsha kwemozulu kwaye kufuneka inyangwe ngobungqina bokutya.
ukuphakama okuqhelekileyo kwentonga yekhabethe
Iingcingo zokukhetha iipallet azisebenzi nje njengemida kodwa zinokuhombisa ngokudibanisa izixhobo zokutyala kuyilo lwazo. Ukwenza i-DIY isixhobo sokutyala ucingo yindlela entle yokuphalaza iipelethi ezingabizi kakhulu ezinezityalo eziqhakazayo.
Ungazakhela eyakho ucingo lweepikethi uyilo olukhawulezayo nolulula ngaphandle kokuqesha ingcali ukuba ikwenzele umsebenzi. Ngokomndilili le projekthi ingathabatha iintsuku ezimbini ukuya kwezintathu. Ngokukodwa inezigaba ezi-2, okokuqala kukuseta iiposti zocingo ngekhonkrithi emngxunyeni ize elandelayo ibambelele kwiipikethi kunye nakwimizila kunye. Unokusebenzisa iipaneli ezihlanganisiweyo zangaphambili okanye ujoyine iipikethi ezizezinye.
Ngaphambi kokuba uqale kule projekthi, nazi ezinye izigama ekufuneka uziqhelile. Izithuba zocingo yinyithi okanye iiposti zomthi ezibekwe emhlabeni ezisebenza njengeyona nkxaso iphambili yocingo. Iipikethi ngamalungu athe nkqo kwaye iileyili ziipaneli ezithe tyaba.
Ngale ndlela yokuyalela, siza kwakha ucingo olude lweeplanga. Nangona kunjalo, loo miyalelo inokusetyenziselwa ukwakha iingcingo ezinde, jonga nje utshintsho kubude kunye nokushiya izithuba. Nanga amanye amanyathelo wokufaka ucingo lweepikethi:
I-4 x 4 x 8 'iiposti zomthi (inokuba yiCedar, iRedwood okanye iPine iphathwe ngoxinzelelo)
1 x 4 iipikethi zeenkuni
2 x 4 x 8 'uxinzelelo lweenkuni
Iibhokisi zebhokisi zentsimbi
ukomisa ngokukhawuleza ikhonkrithi yomxube olungeleyo
peyinta okanye ibala
umngxuma wepost okanye umngxunya wombane
Cwangcisa uyilo. Njengayo nayiphi na iprojekthi, inyathelo lokuqala kukufumanisa injongo yocingo lwakho lokukhetha, oku kuya kukunceda uthathe isigqibo malunga nokuphakama kwayo. Uyilo lomgangatho wokubiyela oqhelekileyo luhlala luziimitha ezine ukuphakama kodwa oku kunokunyuswa kuxhomekeke kwiimfuno zakho. Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngaphambi kokuqala kweprojekthi yakho uyilo lweepikethi zakho. Khetha uhlobo oluhambelanayo nembonakalo yendlu yakho kunye nomhlaba ojikelezileyo. Nje ukuba uthathe isigqibo kuzo zombini, ngoku ungaqhubeka nobeko lwakho.
Linganisa indawo apho ufuna ukwakha ucingo lwakho lweepikethi. Usebenzisa itheyiphu yokulinganisa, fumana ubude bebonke bomjikelezo weyadi yakho kubungakanani bocingo lwakho. Ngokufanelekileyo, iipali zocingo mazibe ziimitha ezi-6 ukuya kwezi-8 ukuqelelana. Njengomzekelo, ucingo olunobude obupheleleyo be-intshi ezingama-120 luya kufuna iiposti ezili-15 ukuya kwezi-20. Ungazibeka izibonda kwindawo olinganise kuyo ukuphawula isikhundla sezithuba zakho zocingo. Qinisekisa ukubeka amanqaku kwizithuba zakho zokugqibela malunga ne-1 ukuya kwezi-2 iinyawo ngaphaya kwalapho ufuna ukuba ziyeke khona. Emva koko sebenzisa umtya womasoni ukudibanisa izibonda njengoko oku kuya kusebenza njengesikhokelo sakho sendlela yokubiyela.
Misela iposti yokuqala. Sebenzisa isixhobo sokubhabha okanye ukumba umngxuma wokumba ukumba umngxuma we-8 'x 8' onobude obuziinyawo ezi-2. Gcwalisa umngxuma ngegrabile yesiseko, emva koko faka i-4 x 4 x 8 ’iposti eyenziwe ngomthi kuyo. Yongeza umxube owomileyo wokuxuba ikhonkrithi emngxunyeni kwaye uqiniseke ukuba iposti ilingana imile nkqo Tamp phantsi ukuqinisekisa ukuba yonke into icinezelwe ngokuqinileyo. Vumela ukunyanga kunye nokuma iiyure ezingama-48 ukuya kwezi-72.
Hlela zonke izithuba ezisele. Emva kokuba isithuba sokuqala sisetelwe, khangela indawo yesithuba esilandelayo ngokulandela umtya wakho wesikhokelo. Ekupheleni kwesithuba sayo esipheleleyo, setha indawo yakho elandelayo kwaye umbe umngxunya kuyo uqiniseke ukuba uyahambelana neposti yakho yokuqala. Nje ukuba izithuba ezibini ezingaphandle zisetelwe, ungadlulisa imitya yesikhokelo sakho kwizibonda.Izithuba zangaphakathi ngoku zinokumiselwa zi-6 ukuya kwi-8 yeenyawo ngaphandle. Linganisa umtya ngeli xesha lokuphumla kwaye umakishe usebenzisa i-masking tape. Dlulisa amanqaku emhlabeni ukuze ubenendawo echanekileyo yokumba kwindawo yakho yangaphakathi. Bamba imingxunya kwaye usete iiposti zakho ezisele.
Faka iileyili. Nje ukuba zonke iiposti zocingo zisetelwe, ngoku ungaqhubeka ngokufaka iileyili ezithe tye eziza kuxhasa iipokethi zakho. Sebenzisa 2 x 4 x 8 ’iinkuni ukwenza oku. Ukusuka kwisiseko seposi yakho yocingo, linganisa i-intshi ezili-12 ukuya kuloliwe ongaphantsi kunye nama-36 phezulu kuloliwe ophezulu. Phawula iiposti zakho zocingo ngale milinganiselo kwaye uqaphele ukuba amanqaku ngawona mda uphezulu weerayile. Ix Lungisa iileyili ngasemva kweeposti zocingo usebenzisa izikrufu esitsaliweyo isiphelo ngasinye sityibilikisiwe.
Faka iipikethi. Unokusebenzisa iipikethi esele zikhethiwe okanye wenze iipikethi zakho kwasekuqaleni. Beka ipikethi nganye kwii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 ngokwahlukeneyo. Ukuqinisekisa ukuba ezi zahlulwe ngokulinganayo, sebenzisa isiqwenga somthi esibekwe 2 x 4 esibekwe kubude bee-intshi ezi-2 ukusuka emhlabeni njengokuba usisiseko. Gcina indawo engagungqiyo kuyo yonke indawo. Namathisela ipikethi nganye phambi komgaqo usebenzisa umpu wesikhonkwane.
Yongeza ukugqitywa kokuchukumisa. Nje ukuba ugqibile ukujoyina iiposti zocingo, iileyili kunye neepokethi kunye, ucingo lwakho lweepokethi ngoku sele lukulungele ukugqitywa. Sebenzisa ibala leenkuni okanye ipeyinti ukongeza umbala ocingweni lwakho. Ukujonga ngakumbi kwendalo, hamba ne-varnish ecacileyo okanye uyipeyinte ngayo nayiphi na imibala oyifunayo. Ungatywina nemithi yakho ukuze uqiniseke ukuba ihlala ixesha elide.Yongeza izinto zokuhombisa ezinjengeefayini ngaphezulu kweposi nganye yocingo. Ezi cap zinokuthengwa njengemithi esele yenziwe. Unokuyila kwakhona ucingo lwakho lweepokethi ngokweminqweno yentliziyo yakho. Izibane ze-Hang, iingqayi okanye iimbiza zodongwe njengezinto ezinomdla kwifowuni yakho yokukhetha. Ukujonga ngakumbi okungaphezulu, faka ukuxhoma izityalo kunye neentyatyambo.
Uyilo lokubiyela amancinci amancinci alungele ukudala imida yegadi okanye imbonakalo yomhlaba. Ngokwesiqhelo kwenziwa ngamaplanga, olu hlobo locingo lungasetyenziselwa ukunqanda izilwanyana ezincinci ekutshabalaliseni izityalo zakho.
Amacingo amancinci amancinci ayenziwe ngamaplanga ahlanganiswe kunye neengcingo zentsimbi zidibanisa kakuhle nale nto
Ucingo lokubiyela ngamaplanga olungalinganiyo lukulungele ukuvala iigadi. Isebenza njengendawo apho izidiliya zinokunyuka khona njengoko zikhula. Umbala ongwevu othulisiweyo walolu cingo lwepokethi usebenza njengemvelaphi yeentyatyambo ezimnyama.
Ukuphakama okuqhelekileyo kokubiyela iipikethi ziinyawo ezi-4. Obu bungakanani bulungele ukwahlula indawo yabucala kunye noluntu ngaphandle kokuthintela umbono. Kukwalungele ukugcina izilwanyana zasekhaya kunye nabantwana ngaphakathi kwemida yekhaya lakho okanye ukukhusela ngokulula izityalo. Isetyenziselwa ukongeza isibheno sokunqanda, iingcingo ezine zokucofa ezinyaweni ziimpawu ezintle zokuhombisa kumakhaya emveli kunye neegadi.
Olu cingo lwamatye kunye nezitena luneLizwe eliDala elihambelana nokuyilwa kwendlu yefama yesiqhelo evaliweyo.
Amacingo amancinci aphefumlelweyo aseFrance amaGothic anokubonakala emveli kodwa anokusebenza nakwizimbo zangoku zezindlu.
Iingcingo zokubambisa zabucala zihlala zi-6 iinyawo ubude. Njengoko igama layo libonisa, isetyenziselwa ukunika ubumfihlo kubamelwane kunye nokuthintela umgca wokubona ukuze abadlulayo okanye abantu ongabaziyo bangaboni ngokupheleleyo oko kungaphakathi kweyadi yakho. Zombini izinto zokuhombisa kunye nokusebenza kwindalo, ukubiyelwa kukhuseleko lwabucala nako kuluncedo xa kufikwa ekunikezeleni ngokhuseleko. Ingasetyenziselwa ukuqulatha izilwanyana zasekhaya kunye nabantwana eyadini.
Uyilo locingo lwepikethi yeenyawo ezili-8 zikwalungele ngokubhekisele kubucala. Ngaphandle kokwahlulahlula ikhaya lakho ngasemva kwendlu, liyasebenza ngokokhuseleko.
Iingcingo ezinde zokuthwala zilungele ukubonelela ngemfihlo kunye nokhuseleko kwizilwanyana zasendle okanye abantu ongabaziyo.
Olu cingo lwaseJapan lubonisa isango eliphefumlelweyo likaTorii kwaye libonisa umtsalane wasempuma. Umbala oqaqambileyo obomvu unika nobomi ukuzola komthi okhuselayo.
Zininzi izinto ezinokwenzeka ezinokuphononongwa xa kufikwa kumba wokunxiba ubiyelo lweepikethi. Zombini izinto ezindala kunye nezindala zinokusetyenziselwa ukuphucula ukubonakala kwayo. Akunyanzelekanga ukuba uchithe imali eninzi ukuphucula ucingo lwakho lwepokethi kuba unokwenza ii-decors kwizixhobo ezihlanguliweyo kwaye simahla. Isithuba phakathi kweeslats ezimileyo kuyilo locingo lweepokethi luvumela igumbi lokuhonjiswa okunje ngezibane, iibhotile, iingqayi okanye ezinye izinto zokuhombisa. Ungabuphucula ubuhle becingo lokubiyela ngokongeza iintyatyambo, amahlahla okanye imidiliya. Ukuyifaka ngaphakathi komhlaba kuyinika imeko yendalo kunye nokuziva kwendalo.
Ukuhonjiswa kocingo olumhlophe ngaphakathi - Imvelaphi
Ukuhonjiswa kodonga oluhombisayo njengolu biyane lothango lweplanga elaminethiweyo kufanelekile kwizicelo zangaphakathi njengoko zongeza umtsalane kumagumbi okulala amantombazana.
I-Shabby kodwa iyathandeka ngelixa ikhupha ilizwe liziva, iipotyi zodongwe ezisetyenzisiweyo zixhonywe ngocingo lweepokethi yindlela yoyilo yokuhombisa igadi yakho.
Ukuxhoma iibhotile ezisetyenzisiweyo ezinemibala kunye neengqayi ngaphezulu kocingo lweepikethi azikukhuseli nje kuphela kwimiphetho ebukhali kodwa ikwabonelela ngendlu yefama vibe.
Intambo yemason ejingayo yokuhonjiswa kocingo- Imvelaphi
Izimbiza zamatye ezixhonyiweyo kwiingcingo zokubiyela ziyinto yokuhombisa kwaye iyasebenza njengoko inokusetyenziselwa ukuxhoma izibane, amakhandlela eti, izityalo okanye isipha esincinci. Ezi zilungele ukongeza umnxeba we-Rustic charm okanye i-Bohemian flair kwi-picket yakho yocingo.
Iitoti zobisi ezisetyenzisiweyo ezihonjiswe ngesithsaba esihle somthi kunye nemidiliya isebenza njengemihombiso yocingo olumhlophe lweepiki.
Uyilo lweepikethi lubonakala luhamba kunye neegadi zeentyatyambo ezintle. Lo ukulo mfanekiso wenziwe kusetyenziswa ipaneli enye yokubiyela ebiyela ii daisy zetyheli.
Siyathemba ukuba uyonwabele inqaku loyilo locingo lokukhetha. Qiniseka ukuba ujonge ezinye izimvo zethu zocingo ngeendlela ezingakumbi zokwenza eyakho indlu yangasemva, igadi kunye neendawo zokuhlala zangaphandle.
# 1 UStevenDepolo
ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
#Mbini imvucube ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 3 imvucube ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 4 imvucube
# 5 imvucube
ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) [/ yandisa]
Uyilo lweeGalari eziNxulumene noMva ongazithandayo:
Iingcamango ezingama-65 zePatio - Iingcamango ezingama-50 zeDisk - Iingcamango zeBrick Patio - Uyilo lweNdlela yokuhamba
Iimveliso zangaphandle zeZippity ZP19002 Fence Ne… $ 99.35$ 109.99 umthengisi ogqibelele Ifowuni (357) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-50'x6 'Brown kunye ne-Black Strip yeNtengiso yeNtengiso… $ 54.98$ 64.99 umthengisi ogqibelele (204) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Southland SEA438 Indoda eNye yoMhlaba I-Auger wi… $ 224.71$ 299.95 umthengisi ogqibelele (1084) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izithole eziSihlanu zoBomvu zeMisedare eNtsha - iThuja plica… $ 19.99 umthengisi ogqibelele (24) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Ubukhulu begaraji zeemoto ezi-4
utshintsha igama lakho kwimichigan
izipho isikhumbuzo kuye
iikhabhathi zasekhitshini ezimenyezelwe ngezinto ezindala
isitya sasemva sasekhitshini